Ungachinja sei ID yako yeApple uye kero yeemail - WebSetNet
Ungashandura sei Apple ID uye kero ye email
Yako Apple ID ndeyako gedhi kune yese yeApple's Cloud services: iTunes, Apple Music, uye iCloud. Asi ko iwe zita rako chairo? Kazhinji kero ye-email: Kazhinji, iri @icloud, @me, kana @mac kero - asi iwe unogona kunge uchinyorerawo neakaundi yako yechitatu-email account, sa @ gmail.com.
Kana iwe uchida kuchinja email kero yakabatana neApple ID yako, unogona kuzviita kubva pawebhu browser. Kune chikamu chikuru, zviri nyore. Nehurombo, pane dzimwe nguva dzekuchinja ID yako yeApple isingashande chaicho: Unogona kuudzwa neApple kuti kero yeemail iwe yaunoda kushandisa yatova ID yeApple, kana kuti ungatadza kuchinja email kero yako.
Usambofa wakatya: Tichafamba iwe kuburikidza nematanho ekuchinja email kero yakabatana neApple ID yako uye nekubatsira kugadzirisa matambudziko akajairika.
Cherechedza: Kana iwe wakanganwa yako Apple ID, unogona zvipore pasina kushandura yako email kero.
Zvinhu zvishoma zvekuzwisisa usati watanga
Ungachinja sei kero yeemail inoshamwaridzana neApple ID yako
Zvekuita kana yako email kero yave kutove ichishandiswa neApple ID
Zvekuita kana usingaone sarudzo yekuchinja yako email kero
Chii chekuita kana iwe ukapinda iyo isiri iyo email kero pawakasika Apple ID
ID yako yeApp ID kero yeemail, se [zita] @ gmail.com kana [zita] @ yahoo.com, asi password haina kungofanana. Wako e password pamwe chimwe chinhu chakasiyana pane yako Apple ID password, kunze kwekunge iwe wakashandisa iyo password yakafanana kune ese maakaundi. (Spoiler: Haufanire kunge uine, asi vamwe vanhu vanodaro.)
Nekuti yako Apple ID iri zvekare email kero, iwe uchafanirwa kuwana kune yakataurwa email kero kuitira kuti uone shanduko. Ita shuwa kuti iwe unoziva yako email account password usati wambochinja.
Paunogadzira Apple Apple ID itsva, Apple inogadzira zvakare @ icloud.com email kero yako. Iyi email kero yakabatana neApple ID yako uye haigone kuvhurwa kana kushandiswa sedzimwe email kero kune imwe Apple ID pasina kune imwe hombe AppleCare kunetsekana.
Apple zvakare inopa zano rekuti ubude muApple ID yako kubva pane zvese zvishandiso zvako usati washandura yako kero yeemail: Izvi zvakanyanya saka hauzotorerwe kana chako chekare Apple ID chisingashandi. Iwe zvakare uchafanirwa kusaina manesi kubva iTunes uye App Store.
Maitiro ekusaina yako Apple ID pa iPhone uye iPad
Kana iwe uchida kuchinja iyo email kero iyo iwe yaunoshandisa yeApple ID yako, uye iwe uchiziva yako Apple ID ino nepassword, unogona kuichinja kubva kune chero webhu browser.
Enda kune appleid.apple.com kubva pawebhu browser pane yako iPhone, iPad, Mac, kana PC.
Pindai zvenyu Apple ID uye Password.
Dzvanya kana tora museve kuti danda mukati.
Iva nechokwadi chekuzivikanwa kwako kuburikidza nekupindura mibvunzo yako yekuchengetedza kana kupinda mune yekuzivisa kodhi iyo yakatumirwa kune chako chakavimbika kifaa (zvichienderana nekuti une maviri-factor kuvimbisa inogoneswa).
Muchikamu cheAccount, tinya kana tap pepeta pedyo ne "Kuwanika At."
Dzvanya kana tapota Chinja Email Kero.
kupinda itsva email kero.
Dzvanya kana tapota Ramba.Kodhi yekuzivisa ichazotumirwa kune itsva email kero.
Vhura iyo e kubva kuApple.
Dzvanya kana tora pane Ratidza kero yeemail batanidza mune iyo email.
kupinda kodhi yekodhi at appleid.apple.com.
Dzvanya kana tapota ongorora.
Dzvanya kana tapota Done kana wapedza.
Munyika yakakwana, aya ndiwo matanho chete aungade kushandura kero yeemail yakabatana neApple ID yako. Asi, matambudziko anomuka. Kana iwe ukazviwana iwe uchisvika pamatambudziko ekuedza kuisa itsva Apple ID email kero, verenga.
Kana iwe ukaona yambiro yekuti email kero yauri kuyedza kuchinja kuti yave kutoshandiswa, imo nekuti imwe Apple ID yato sunganidzwa kuaccount iyi. Kunyangwe iwe usayeuke kugadzira account nayo kana kuigadzira pachako, yave kutoshandiswa. Zvakanaka? Zvino, ngatizvigadzirise.
Iwe unofanirwa kuwana matatu eemaakaunti maitiro aya.
Iyo email account yakabatana neyako achishingaira Apple ID.
Iyo email account yakabatana neApple ID yaunoda kuchinja yako anoshanda Apple ID kuti (iwe haudi kuziva chero Apple ID password, asi uchafanira kuziva iyo e pasiwedhi).
Iyo yechitatu email account iyo inogona kushandiswa seyekurasa-email (iyo isati yamboshandiswa seApple ID). Iwe unogona kugadzira imwe usati watanga, kana kushandisa yekare email email iyo iwe yausingazoshandisa zvakare (asi ziva iyo password ye).
Nhanho yekutanga: Tora iyo password yeApple ID yakabatana neemail iyo iwe yaunoda kuchinja kuti
Kuti ubvise iyo Apple ID iyo parizvino iri kukanganisa email kero yaunoda kushandisa, iwe unofanirwa kukwanisa kuigamuchira. Iwe unogona kukumbira Apple kuti ishandise password yeApple ID yakabatana nayo.
Enda kune yakazanec.com kubva chero pawebhu browser.
kupinda chikero chetsamba yemumhepo unoda chinja yako inoshanda Apple account ku (iyo yausingakwanise ikozvino kushandura nekuti yatove kushandiswa).
Tora mu CAPTCHA mavara kuratidza kuti hausi robhoti.
Dzvanya kana tapota Ramba.
sarudza Ndinoda kuseta password yangu.
sarudza Tora email.
Vhura iyo e unogamuchira kubva kuApple.
Dzvanya kana tapota Dzosera izvozvi.
Pinda nyowani nyowani.
Dzorerai nyowani nyowani.
Dzvanya kana tapota Reset Password.
Iye zvino iwe unoziva password yeApple ID iyo iwe yausingayeuke kugadzira uye haudi kushandisa zvakadaro, kuti iwe ugone kuiwana kuti uite shanduko kwairi.
Nhanho yechipiri: Shandura iyo email inosanganiswa neisingashandi Apple ID
Zvese zvawakaita muChikamu 1 zvaive zvekuti ugone kuendesa iro kero reemail kubva kune risingashande Apple ID. Iye zvino zvauri kukwanisa kuwana mairi, unogona kushandura email kero yakabatana nacho kune chimwe chinhu chausinei nacho. Apa ndipo paunogona kushandisa kero yekare email kana rudzi nyowani iwe uchangogadzira nekuda kweiyo chete chinangwa chekuishandisa iyo isingashande Apple ID.
Tevedza nhanho dze kuchinja email kero yakabatana neApple ID yako uye shandisa iyo Apple ID email kero uye password kubva Step 1 pamusoro. Chinja iyo email inosanganiswa nayo kuti account kune kero yekukanda email.
Nhanho yetatu: Enda kumashure uye shandura yako inoshanda Apple ID email
Iye zvino kuti iyo email kero iwe yaunoda kushandisa kune yako inoshanda Apple ID yasunungurwa, iwe unogona kuita shanduko. Tevedza nhanho dze kuchinja email kero yakabatana neApple ID yako. Panguva ino, kana iwe pinda iyo itsva email kero, uchanyatsogona kushandisa iyo yaunoda.
Kana iyo email kero yakabatana neApple ID yako i @ me.com, @ Mac.com, kana @ icloud.com kero, unogona chete kuchinja yako Apple ID kune imwe @ icloud.com kero yakatove yakabatana neakaunti yako. Kana iwe uchida kuchichinjisa kune wechitatu-mubatsiri mupi, iwe uri kunze kwemhirizhonga: Iyo chete sarudzo yauinayo mune iyo nhandare ndeyekutanga pamusoro pechitsva cheApple ID. Nehurombo, izvi zvinoreva kurasikirwa nezvose zvawakabatanidza neApple ID yako yazvino.
Kubva kuna Apple Rugwaro Rutsigiro:
Kana yako email kero ichipera ne @ icloud.com, @ me.com, kana @ mac.com, haugone kuchinja yako Apple ID kukero yechitatu-ye-email. Iwe zvakare hauzoone Shandura Apple ID pane yako account peji kana iyo sarudzo yekubvisa yako email pane yako iPhone, iPad, kana iPod inobata neAppa 10.3 kana gare gare.
Kana iwe ukawira mune ino kambi uye uchida kushandisa itsva yechitatu-bato email kero seApple ID yako, unogona kufunga nezve kurodha pasi zvakawanda sezvazvinogona pane zvako zvishandiso kana kune imwe gore-yakavakirwa sevhisi (semafoto, vatauri, iCloud Drive zvinyorwa, zvirimo kwete yakatengwa pa iTunes, nezvimwewo), uye wozotanga pamusoro pekutanga neakaunti yako yeemail yaunoda.
Yambiro: Kana ukaita izvozvo, unenge warasikirwa nezvese zvaunotenga iTunes, kusanganisira mabhaisikopo, mimhanzi, iBooks, uye zviwanikwa mukati mezvishandiso zvako zvese. Saka, ita shuwa kuti zvakakodzera kurasikirwa.
Ona maitiro ekutora Mapikicha pane yako iPhone
Wona maitiro ekutamisa mafoni, makarenda, uye zviyeuchidzo kune yako iPhone kana iPad nekubuda muCloud
Ona maitiro ekugadzira Apple Apple ID itsva pane yako iPhone kana iPad
Kana iwe netsaona wakashandisa isiriyo email kero kuti ugadzire Apple ID (semuenzaniso, iwe wakashandisa .com panzvimbo pe .net), unogona kugadzirisa chikanganiso nekungochinja kero yeemaimeri inosanganiswa neApple ID yako.
Tevedza nhanho dze kuchinja email kero yakabatana neApple ID yako asi shandisa email isiriyo kero yekusaina. Kana uchinge wachinja email kero, unenge wave kunaya semvura.
Iwe unayo mimwe mibvunzo pamusoro pekuchinja email kero yakabatana neApple ID yako? Unogona kugara uchitarisa Apple gwaro rechisimba paruzivo, vatumire mune zvakataurwa pazasi, kana kushanyira edu maMore maforamu. Kana iwe uine imwe nyaya, yedu verenga munharaunda vanogona kukubatsira iwe kunze.
Chii chinonzi Apple iCloud Drive uye inoshanda sei?
Mashandisiro ekushandisa iCloud Drive pane iPhone uye iPad
Nzira Yokusvitsa ICloud Photos To Windows 10 PC
Mashandisiro ekushandisa iCloud Keychain pane iPhone nePad
Categories apuro Post navigation
Kure: Lone Sails 'solo rwendo iri kure nokusurukirwa
GIGABYTE Inotanga CMT4030-Series PCIe 3.0 x8 uye PCIe 3.0 x16 SSD Risers
Maitiro Ekushandura Makowadhi Mafaera kuIzwi Zvinyorwa pa Windows, uye Vice Versa
© 2021 WebSetNet • Yakavakwa ne GeneratePress